10 Izindawo ezesabekayo ze-LGBT | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Izindawo ezesabekayo ze-LGBT
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba EBelgium, Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe
Noma ngabe uyi-diva, nontobeko, queer, isitabane, ongqingili, noma ayikakulungeli ukuzichaza, lezi 10 izindawo ezinhle ze-LGBT zizojoyina zikubungaze. Ukusuka ekuqabuleni eParis kuya emaphathini njengenkanyezi yedwala eBerlin, le mizi emangalisayo yaseYurophu imayelana namalungelo alinganayo, ukuziqhenya, nothando ngayo yonke imibala yothingo.
1. Izindawo ezesabekayo ze-LGBT emhlabeni: Berlin
Konke lokhu kwaqala ngesisekelo senhlangano yokuqala yezitabane emhlabeni wonke. 1897 unyaka ophawule isinyathelo sokuqala ku Ukuguqulwa kweBerlin kuya enhlokodolobha yezitabane nezitabane zomhlaba.
Ubuhle nothando kuza zonke izinhlobo, imibala, nezocansi. IBerlin ingenye yezindawo ezibekezelela kakhulu, vula, nokwamukela amadolobha emhlabeni. IBerlin iyindawo enhle ye-LGBT eYurophu futhi yamukela zonke izinhlobo zothando. Namuhla, IBerlin yindawo yokugcina ye-LGBT, kepha ithole ukuthandwa kwayo kuphela phakathi nekhulu lama-20, kumangalisa kakhulu indlela ende eyenziwe yidolobha.
INollendorfplatz eSchoneberg iyinhliziyo nomphefumulo wasendle wesigameko sezitabane esaziwayo eBerlin. Lapha, ungahlanganyela, eyakho, isiphuzo, futhi ujabulele impilo namasiko e-LGBT.
Isikhathi esihle sokuzwa i-LGBT extravaganza yisikhathi sasehlobo, ku-epic CSD Berlin. Cishe 1 abantu abayizigidi namakhulu okuntanta okuhlobisiwe kwakha imigwaqo emikhulu yokuziqhenya emhlabeni, ngamalungelo alinganayo nenkululeko yokuthanda kuyo yonke imibala yothingo.
Izinto ezihamba phambili okufanele uzenze
Vakashela imnyuziyamu yezitabane iSchwules, isikhumbuzo sokuqala sokunyakaza kwezitabane, ibha edumile yaseMarietta, ICafe Berio, iklabhu yezitabane endala kunazo zonke iHeile Welt, noma iphathi ye-queer ehamba phambili ku-KitKat-Klub.
2. Indawo Emangalisayo ye-LGBT ENetherlands: Amsterdam
Lapho uyizwe lokuqala emhlabeni ukwenza umshado wobulili obufanayo ngokusemthethweni, futhi ungenye yezindawo ezinhle kakhulu ne-LGBT emhlabeni. Ngakho, i-Amsterdam emnandi futhi emangalisayo yayiyidolobha lokuqala eYurophu ukusingatha iMidlalo Yezitabane e 1998 futhi umbukiso wokuziqhenya wase-Amsterdam uthathwa njengenye yezinto ezinhle kakhulu emhlabeni.
Uma ungazi ukuthi yiziphi izindawo okufanele ushaye kuzo edolobheni, bese ume ngase Iphoyinti Eliphinki, indawo yolwazi mayelana ne-LGBT- izindawo ezinobungane e-Amsterdam. I-Amsterdam inesabekayo indawo yokuphila ebusuku, kodwa lingakashoni ilanga, kufanele uhambe emigwaqweni nasezindaweni ezilandelayo, lapho indawo ye-LGBT iphefumula futhi ikhahlela: Ezokulawula, umlando weKerkstraat, Amstel, bese kuthi eZeedijk naseWarmoesstraat yesigcawu esimnandi se-LGBT sasebusuku e-Amsterdam.
Thola indawo yokudonsa edume kakhulu eNdlovukazi, phuza i-cocktail eGetto, uthole ugqozi esitolo sezincwadi se-LGTB sase-Amsterdam, Ukujabula, kanye nephathi kumakilabhu eTaboo noma Exit kuReguliersdwarsstraat street. Ngaphezu kwalokho, Ukuziqhenya komsele wase-Amsterdam kungenye yemigwaqo yokuziqhenya eyingqayizivele ukuvakashela emhlabeni.
3. Izindawo ezinhle kakhulu ze-LGBT e-UK: Brighton
Kusukela ngawo-1930 uBrighton ubelokhu eyisiphephelo kuwo wonke umuntu obedinga ukuhlola ubulili babo. Idolobha elake lasogwini lolwandle seliyindawo enobungane ye-LGBT e-UK, eduze kodwa kude nenhloko-dolobha.
Umakhelwane waseKemp Town uyindawo ye-LGBT eBrighton, sibonga amahhotela ayo asezitolo, ezinkantini, nezindawo zokudlela. Lapha, uzothola ama-vibes amangalisayo, Isimo esibandayo lapho ungagubha khona uthando ngazo zonke izinhlobo. Ngaphezu kwalokho, uma uhlela ukuhamba yonke indlela nesithandwa sakho, lapho-ke iBrighton inezindawo ezingaphezu komshado ezimbalwa njengeRoyal Pavilion, futhi kusuka lapho kuqale imikhosi kuCharles Street noma eBrighton ebhishi.
Jabulela upende ku-gay The Bulldog pub, kodwa qala uphumule kuThe Brighton Sauna, bese uqedela ubusuku ku-Revenge, iklabhu ephezulu yasebusuku ye-LGBT.
4. Idolobha Elimangalisayo Lobungani LGBT eJalimane: Cologne
Idolobha elinamakhofi amaningi kunabantu, nemicimbi eminingi yokuziqhenya kunanoma iyiphi enye indawo, ICologne ingenye yezindawo ezinhle kakhulu futhi ezinobungani be-LGBTQ eYurophu. ICologne inobungani be-LGBTQ kangangokuba inohambo lwayo lweGaily, ukuze ukwazi ukuthola izimfihlo ezigcinwe kahle zedolobha nganoma yikuphi ukunambitheka nombala wothingo.
Ngaphezu kwalokho, i-cologne yindawo yokugcina ye-LGBT, ngoba ine 2 izigcawu zobungqingili, yebo lokho kulungile. I-Heumarkt-Mathiasstrasse endala ne-Bermuda Triangle yasemadolobheni yesixuku esincane. Intshonalanga inamaqembu amahle kakhulu namakilabhu okudansa okuzamazamisa umzimba wakho nempumalanga ukuthola izindawo ezi-classed nezendabuko ze-hangout.
Awunaso isikhathi sokuvakashela zombili? Azikho izinkinga! Ngoba ngesitimela esingaphansi komhlaba se-S-Bahn, ungahamba uye emuva naphambili kaningi ngangokunokwenzeka futhi ushesha kakhulu.
Ungaphuthelwa yiChristopher Street Day yaseCologne, i-Cologne Pride eyaziwa umhlaba wonke. Ngaphezu kwalokho, Imakethe kaKhisimusi kaGay yaseCologne, neCarnival ngoFebhuwari. Okwe-after-party hlola iDeck 5 noma u-Amadeus.
5. Indawo enhle ye-LGBT eFrance: Paris
Idolobha elithandana kakhulu emhlabeni ligubha uthando njalo ngeminithi nsuku zonke, futhi wamukelwa kakhulu ukugubha uthando lwakho ngayo yonke imibala uthingo. Igcwele ubukhazikhazi, isitayela, isigaba, futhi kumnandi, IParis ingenye ye-LGBT enhle kakhulu- izindawo ezinobungane emhlabeni.
IMarais enhle iyisikhungo sendawo yezitabane eParis, nazo zonke izindawo ezithandwayo ze-LGBT ezise-Place de la Bastille edumile, I-Republic Square, kanye neHotel de Ville. Unyaka wonke, kusuka ngoJanuwari kuya kuJulayi, kukhona imicimbi emangalisayo enikezelwe emphakathini we-LGBT: imikhosi, ezobuciko, ifilimu, futhi-ke umbukiso wokuziqhenya. Lapha, uzozizwa usekhaya, futhi unezindlela eziningi zokuhlola umphakathi we-LGBT French futhi uthole iParis.
URaidd Barn wabadansi bokuhamba nokudansa oku-sexy, Ikhefi lakwaDebonair ophahleni lweCite de la Mode et du Design yama-macaroon nemibono emangalisayo yeSeine, kanye neBadaboum bistro esifundeni saseBastille kubo bonke abaculi abasha baseFrance, bese uqabulana ne-Eiffel Tower ngemuva.
6. Idolobha Elimangalisayo Lobungani LGBT E-Austria: Vienna
Umlando namasiko ase-Austrian acebile kugcwele izindaba ezimayelana nababusi abayizitabane, ngakho-ke ukuba yi-LGBT- enobungani iyingxenye yeDNA yakuleli dolobha elihle. Ngakho-ke, akumangalisi ukuthi eVienna ungaqhubeka 2 Izinkambo zedolobha lamaGay ukuthola umlando womphakathi we-LGBT nempilo. Ngaphezu kwalokho, ngokufanayo nakwezinye izindawo ezinobungane ze-LGTB kuhlu lwethu, kunezehlakalo eziningi ze-LGTB ongazibala unyaka wonke.
Omunye wemicimbi ekhethekile kakhulu ye-LGBT yonyaka yiRainbow Ball. IHotel Schonbrunn isingatha leli bhola elikhulu, lapho ungadansa khona iWaltz futhi ubonise umuzwa wakho osezingeni eliphezulu wemfashini ngezingubo ezimangalisayo zebhola nama-tuxedos.
Nambitha ikhofi laseViennese eCafe Savoy, iphathi noMiss Candy kwiklabhu yaseZulwini Vienna, ngithi I Do in an amazing Alpine setting, futhi uthathe izithombe zakho zomshado lapho izakhiwo eziphawulekayo zedolobha zikuzungezile.
7. Idolobha Elimangalisayo Lobungani LGBT E-Ireland: Dublin
Mhlawumbe i-Ireland yaziwa ngabaningi njengeqine kakhulu, zenkolo, futhi iqandiswe ngesikhathi. Nokho, akunjalo ngeDublin enamandla, kumnandi, futhi kakhulu LGBT- friendly. Ngo 2015, umshado wezitabane waba semthethweni, ingqophamlando emangalisayo ekuguqulweni kwe-Ireland yaba yinkululeko, nesizwe esivulekile.
Ngakho, uzothola iDublin enye i-LGBT emangalisayo- indawo enobungane e-Amsterdam nase-berlin. UJuni yinyanga yokuziqhenya eDublin, kepha kufanele futhi uhlole i-International Dublin Gay Theatre Festival, enkulu kunazo zonke emhlabeni.
Ama-Cocktails noma amaqembu eGeorge Bar, isikhungo sezitabane eDublin, I-PantiBar, I-Oscars Cafe, ukuhamba ngomkhumbi, noma i-sauna eyisitabane yokuphumula yizinto zokugcina okufanele zenziwe ukujabulela ngempela umphakathi omangalisayo we-LGTBQ eDublin.
8. Indawo enhle ye-LGBT: Belgium
IGhent neBrussels zaziwa njenge 2 izindawo ezinhle kakhulu ze-LGBT eBelgium. Leli lizwe bekungokwesibili ukufaka ngokomthetho imishado yabantu bobulili obufanayo. EBrussels, I-Rue du Marche au Charbon iyisikhungo sesigcawu se-LGBT.
Ngokwesibonelo, eRainbow House, ungajabulela umkhosi wefilimu waseLesborama, yezobuciko, neminye imisebenzi eminingi yamasiko. Nokho, uma ufuna ukubukisa ngalokho imvelo kamama ekunikeze khona, khona-ke uChez Maman wamukela ama-divas kuyo yonke imibala nokukhanya kothingo.
9. Indawo enhle ye-LGBTQ enobungane: London
I-West End, ezinkantini, izakhiwo, indlovukazi. ILondon iyisithonjana hhayi kuphela ngenxa yasebukhosini, kepha ngoba iyindawo enhle ye-LGBT eYurophu. Idolobha liyi-microcosmos emhlabeni, Kusho idolobha elemukela abantu abavela kuwo wonke amagumbi omhlaba, futhi lifudumele kakhulu futhi linobungane kubungqingili, ongqingili, queer, noma i-transgender.
Izitolo zezincwadi ezikhethekile, emangalisayo imigoqo yophahla, yaseshashalazini, nomculo, ILondon inezindawo eziningi ezithokozisayo zokujabulela impilo enhle kakhulu namasiko e-LGBT.
Ngakho, uma ufuna ukujabulela okuhle kwe-LGTB eLondon, ikhanda eDlastone Superstore ukuthola i-cabaret enhle kakhulu. Okwesigcawu se-queer esihle kakhulu, I-Glory pub inhle kakhulu, futhi uqiniseke ukuthi ume ngesitolo sezincwadi esidala kunazo zonke se-LGBT eNgilandi, Izitabane’s Izwi.
10. Izindawo ezinhle ze-LGBT: Milan
Ngokungafani namanye amadolobha alungele i-LGBT ohlwini lwethu, Amalungelo e-LGBT awekho emthethweni eMilan. Noma kunjalo, inhlokodolobha yezemfashini nobuhle emhlabeni izishaya isifuba ngobungqingili futhi ibamba nomkhosi wamabhayisikobho we-LGTBQ waminyaka yonke.
Lapho useMilan, indawo yasePorta Venezia iyinhliziyo yempilo namasiko e-LGBT. Emigwaqweni yaseLecco naseSan Martini, uzothola imigoqo nama-club apholile kunawo wonke anobungqingili.
Kulula kakhulu ukuqeqesha ukuhamba eYurophu nokuhamba ngayo Londoloza Isitimela kepha akulula ngaso sonke isikhathi ukuthola izindawo ezinhle ze-LGBT, yingakho sikubhalele lokhu okuthunyelwe kwebhulogi.
Ingabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Izindawo eziyi-10 Ezesabekayo ze-LGBT” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fawesome-lgbt-friendly-destinations%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
isitabane ongqingili I-LGBT I-LGBTUkukhethwaI-Europe Ama-LGBUbungani Izindlela Zokuzijabulisa Zobungani I-LGBTQ PrideParadeEurope
Ukuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi China, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Italy